Ambien ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်မည်နည်း တစ်ယောက်တည်း - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ဖျော်ဖြေရေး သတင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး နှိပ်ပါ ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ သတင်း ဆီးဂိမ်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကျန်းမာရေးပညာရေး
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> Ambien ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှောင်ရှားရမည်
Ambien ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ | မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှု | စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း | Ambien vs. Ambien CR ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ | ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲ | သတိပေးချက်များ | ထုတ်ယူခြင်း | အလွန်အကျွံသုံးစွဲ | အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ | ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲ
Ambien (zolpidem tartrate) သည်ရံဖန်ရံခါကုသမှုအတွက်အသုံးပြုသောအိပ်စက်ခြင်းကိုဖော်ညွှန်းသည့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ အိပ်မပျော် ။ Ambien သည်အိပ်ပျော်ရန်နှင့်အိပ်ချိန်ကြာချိန်ကိုကြာစေသည်။ အားလုံးသက်သာစေသောဆေး - ညှို့မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဝသကဲ့သို့, ဆေးဝါးမသောက်မီမူးယစ်ဆေး၏အလားအလာရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ သတိပေးချက်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်နားလည်မှုကိုအပြည့်အဝနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
RELATED: Ambien အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ Ambien အထူးလျှော့စျေးကိုရယူပါ
Ambien ၏အသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ -
ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအများစုမှာရေတိုဖြစ်ပြီး Ambien ဆေးသောက်ပြီးနောက်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းတစ်နေ့လျှင်လျော့သွားနိုင်သည်။
Ambien သည် ဦး နှောက်ကိုနှေးကွေးစေသဖြင့် Ambien ၏အလေးနက်ဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် ဦး နှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည်:
ရှုပ်ထွေးသောအိပ်စက်ခြင်းအပြုအမူများ (အိပ်စက်ခြင်း၊ အိပ်ခြင်း - စသည်တို့)
ပြင်းထန်သောဓာတ်မတည့်မှုများဖြစ်သည့်သွေးပေါင်ချိန်ရုတ်တရက်ကျဆင်းခြင်း (anaphylaxis)၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊
Ambien တွင်ရှုပ်ထွေးသောအိပ်စက်ခြင်းအပြုအမူများအတွက် FDA အနက်ရောင်သေတ္တာသတိပေးချက်ပါရှိသည်။ အိပ်ပျော်စဉ်၊ အိပ်ပျော်စဉ်၊ အိပ်မောကျခြင်း၊ အိပ်ခြင်းချက်ပြုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အလားတူလှုပ်ရှားမှုများစသည့်ပုံမှန်နိုးထလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည်။ zolpidem ကြောင့်ရှုပ်ထွေးသောအိပ်စက်ခြင်းအပြုအမူများသည်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ သေခြင်းနှင့်ပင်လျှင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည် လူသတ်မှု ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေစဉ်ရှုပ်ထွေးသောအိပ်စက်ခြင်းအပြုအမူများကြုံတွေ့ရပါက Ambien အားချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းသွားလိမ့်မည်။
မှီခိုမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့် Ambien ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးပြန့်ပွားရေးအေဂျင်စီ (DEA) ကထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဒါဟာရေရှည်အသုံးပြုရန်အတည်ပြုမပေးပါ။ ထို့အပြင် zolpidem သည်စိတ်ကျရောဂါကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသဖြင့် Ambien အားစိတ်ကျရောဂါရှိသူများမှမယူသင့်ပါ။
ဆေးညွှန်းမှာအိပ်ဆေးအထောက်အကူပြုသူတွေကဖြစ်နိုင်တယ် သုံးမှငါးကြိမ် အိပ်ဆေးပြားကိုမသောက်သောလူများထက်သေဆုံးရန်သို့မဟုတ်ကင်ဆာရောဂါကူးစက်ရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းနားလည်ကြသည်မဟုတ်။ သို့သော်အန္တရာယ်မှာဆေးပမာဏအပေါ် မူတည်၍ တစ်နှစ်လျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်သာအိပ်စက်ခြင်းဆေးသောက်သူများအတွက်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။
In လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု , Ambien သည်အကြံပြုထားသည့်ဆေးကိုယူသောလူနာ ၁% အောက်၌ဆေးခန်းတွင်သိသိသာသာမှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
zolpidem သည်မှတ်ဥာဏ်ကိုထိခိုက်သောအခါလူနာများသည်ရှိပြီးသားအမှတ်တရများကိုမဆုံးရှုံးပါ။ အဲဒီအစား ဦး နှောက်ကမှတ်ဥာဏ်အသစ်တွေဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုဆုံးရှုံးပြီး anterograde amnesia လို့ခေါ်ပါတယ်။ လက်တွေ့ကျသောမှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှုသည်အလွန်ရှားပါးပြီး Ambien ကိုယူသူအားလုံးနီးပါးသည်တွေ့ကြုံခံစားကြရလိမ့်မည် မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းအချို့ဒီဂရီ ။ အဆိုပါသက်ရောက်မှုများယာယီဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မူးယစ်ဆေးဝါးရပ်စဲသောအခါမှတ်ဉာဏ်တိုးတက်ကောင်းမွန်သည်။
Ambien သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်စိတ်ဖိစီးမှုများသောယေဘုယျအားဖြင့်ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသောဆက်စပ်မှုနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်။ ဒီနှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အကြံပြုဆေးထိုးအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးထိုး၏ထက်ဝက်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာ လူနာ ၁% အောက်သည်အမြင်အာရုံသို့မဟုတ်အာရုံအာရုံစူးစိုက်မှု (မှားယွင်းသောအမြင်များ) ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity disorder (ADHD), စိတ်ရောဂါ (သို့) အခြားစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများသုံးစွဲခြင်းကဲ့သို့သောအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများရှိသူများကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းဟာကလေးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကြားမှာလူကြီးများထက်ပိုမိုများပြားပါတယ်။
zolpidem သောက်နေတဲ့လူနာတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တချို့ရှိတယ် အရက် ဆိုလိုသည်မှာပြင်းထန်သောရှုပ်ထွေးမှုများ၊ Ambien-induced delirium သည်အလွန်ရှားပါးသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပြီးသက်ကြီးရွယ်အိုများကိုကန့်သတ်ထားသည်။
Ambien vs. Ambien CR ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Ambien ကိုချက်ချင်းလွှတ် (Ambien) သို့မဟုတ်တိုးချဲ့ဖြန့်ချိသည့်ပုံစံ () Ambien CR ) ။ ချက်ချင်းဖြန့်ချိ Ambien ကိုညအချိန်တွင်လူများအိပ်ပျော်စေရန်ကူညီပေးသည်၊ သို့သော် Ambien CR သည်လူများအားအိပ်ပျော်ရန်နှင့်ညတစ်ညလုံးအိပ်ရန်ကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သော Ambien ကိုချက်ချင်းထုတ်လွှတ်သော Ambien နှင့်ထပ်မံဖြန့်ချိသည့် Ambien ပမာဏကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
Ambien CR သည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလွှတ်လိုက်သောကြောင့်၎င်းကိုယူပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ကျန်သောသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှု၊ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ Ambien CR ကိုယူထားသောလူနာများသည်နောက်လာမည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။
Ambien vs. Ambien CR ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ambien Ambien CR
ခေါင်းကိုက်ခြင်း + +
အိပ်ငိုက် + +
မူးယစ်ဆေးဝါး + +
Ambien သည်ခန္ဓာကိုယ်၏အလျင်အမြန်ဇီဝြဖစ်ပျက်သွားပြီးတစ်နေ့မပြည့်ခင်သွေးစီးဆင်းမှုတွင်မတွေ့ရှိနိုင်သောအဆင့်သို့ကျဆင်းသွားသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများ, သို့သော်, နေသမျှကာလပတ်လုံးသုံးရက်ကြာဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဤအချိန်ကာလများထက်ကြာရှည်မခံပါ။
Ambien ကိုနာတာရှည်သို့မဟုတ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲလျှင်၎င်းဆေးကိုရပ်ဆိုင်းပြီးနောက် ၆ ပတ်မှရှစ်နာရီအကြာတွင် ၁ ပတ်မှ ၂ ပတ်အထိကြာနိုင်သည်။
Ambien contraindications & သတိပေးချက်များ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် Ambien ကိုသတိကြီးစွာ ထား၍ လူနာများကိုဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။ အနီရောင်အလံအမြောက်အများသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားမူးယစ်ဆေးဝါးကိုပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောအိပ်စက်ခြင်းအပြုအမူများ၊ ဓာတ်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုများ၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသမိုင်းနှင့်အခြားလက်ရှိအခြေအနေများကဲ့သို့သောဆေးညွန်းစာကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
Ambien သည်အန္တရာယ်ရှိသည့်ရှုပ်ထွေးသောအိပ်စက်ခြင်းအပြုအမူများဖြစ်သည့် Slewalking၊ Sleep-Drug, Sleeping-dahar ရောဂါများနှင့်အလားတူအိပ်စက်ခြင်းရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့် Ambien သည်ရှုပ်ထွေးသောအိပ်စက်ခြင်းအပြုအမူများခံစားခဲ့ရသောလူနာများအားသတ်မှတ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ ရှုပ်ထွေးသောအိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ပထမဥပမာအနေဖြင့် Ambien ကိုချက်ချင်းရပ်တန့်လိမ့်မည်။
သွေးဖိအားရုတ်တရက်ကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ် angioedema (အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်း) စသည့်ပြင်းထန်သည့်ဓာတ်မတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါက Ambien သည်ဆက်လက်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။
Ambien သည်စိတ်ကျရောဂါ၏လက္ခဏာများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သဖြင့်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသောလူနာများကိုသတိထားစေမည်။ ထို့အပြင် Ambien သည် anti-dipressant ဆေးများ (SSRI နှင့် MAO inhibitors) နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဆေးညွှန်းကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
အိပ်ပျော်ခြင်းသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြmsနာများသည်နောက်ခံစိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းမှု၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။ နောက်ခံအခြေအနေကိုကုသနိုင်လျှင် Ambien သည်မှန်ကန်သောကုထုံးမဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့ဖြစ်သော Ambien အားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်မချင်းသတ်မှတ်ထားပါ။
Ambien သည်အသက်ရှူမှုကိုနှေးကွေးစေသဖြင့်နာတာရှည်အဆုပ်ရောဂါ (COPD)၊ myasthenia gravis သို့မဟုတ် sleep apnea စသည့်ယခင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများရှိသည့်လူနာများသည်အထူးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများလိုအပ်နိုင်သည်။
အသည်းရောဂါ၊ myasthenia gravis၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါရှိသူများသည် Ambien သို့မဟုတ် Ambien CR အတွက်သင့်လျော်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမဖြစ်နိုင်ပါ။ ambienien ကိုသက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးများနှင့်အားနည်းနေသောလူနာများအတွက်နည်းနည်းလေးကျသည့်ဆေးညွှန်းဖြင့်သတ်မှတ်မည်။
Zolpidem သည်သန္ဓေသားကို ဖြတ်၍ သန္ဓေသား၏သွေးစီးထဲသို့ဝင်သွားလိမ့်မည်။ Ambien သည်ကိုယ် ၀ န်နှောင်းပိုင်းတွင်သောက်ပါကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ သက်သာခြင်း၊ ကြွက်သားနည်းခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာများကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသောကလေးငယ်များသည်မိခင်နို့တွင် Ambien အနည်းငယ်မျှသာပါဝင်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် zolpidem ကိုကိုယ် ၀ န်၏တတိယသုံးလပတ်တွင်သို့မဟုတ်သူနာပြုနေသောအမျိုးသမီးများအတွက်အသုံးပြုရန်သတိထားသည်။
ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းအသုံးပြုသောအခါ Ambien သည်လူနာ၏ ၁% အောက်သာမှီခိုမှုနှင့်ဆုတ်ခွာခြင်းကိုဖြစ်စေသည် လက်တွေ့နှင့် postmarketing စမ်းသပ်မှုတွေအရသိရသည် ။ သို့သော် Ambien ကိုနာတာရှည် (သို့) ဆေးပမာဏမြင့်မားစွာအသုံးပြုပါကမှီခိုမှုနှင့်ဆုတ်ခွာမှုနှုန်းပိုများသည်။
ထုတ်ယူခြင်းလက္ခဏာများသည် Ambien ဆေးမည်မျှသောက်သုံးသည်နှင့်ဆေးသည်မည်မျှလျင်မြန်စွာရပ်ဆိုင်းသွားသည်အပေါ် မူတည်၍ ပျော့ပျောင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်နိုင်သည်။ ဤလက္ခဏာများသည်ဆေးဝါးများရုတ်တရက်ရပ်တန့်ခြင်း၊ သောက်သုံးသောပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးထိုးရန်ပျက်ကွက်ခြင်းတို့မှနာရီအနည်းငယ်အတွင်းစတင်နိုင်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများတွင်အိပ်စက်ခြင်း (အိပ်မပျော်ခြင်း)၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ တုန်ခါခြင်း၊ ဆိုးရွားသောဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများမှာအတက်အကျရောဂါဖြစ်သည်။
Ambien သည် ၂၄ နာရီအတွင်း ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မီလီဂရမ်အထိသောက်ရန်အကြံပြုထားသောဆေးများဖြစ်သည်။ Ambien အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည် (၂၄ နာရီအတွင်း ၇၀ မီလီဂရမ်) သို့မဟုတ် Ambien နှင့်ဆင်တူသောစိတ်ကျဆေးများနှင့်ပေါင်းစပ်လျှင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ Ambien သည် ဦး နှောက်ကိုအဓိကနှေးကွေးစေသဖြင့်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးမှု၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု၊ ၎င်းသည်နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်အသက်ရှုခြင်းကိုနှေးကွေးစေပြီးအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေသည်။ Ambien အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုသည်သေဆုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသိရှိရသည်။
ambien interaction က
Ambien သည် ဦး နှောက်ကိုနှေးကွေးစေသည့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (CNS) စိတ်ကျရောဂါဟုခေါ်သည်။ Ambien သည်သက်သာစေသောဆေး၊ မော်တာချို့ယွင်းခြင်းနှင့်အခြား CNS စိတ်ကျရောဂါ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် Ambien နှင့်အခြား CNS စိတ်ကျရောဂါများကဲ့သို့ပေါင်းစပ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားလိမ့်မည် -
အရက်, ဆေးခြောက် , cannabinoids, melatonin ဖြည့်စွက်, valerian အမြစ်, ဒါမှမဟုတ် kava
Antihistamines ထိုကဲ့သို့သော promethazine, azelastine, သို့မဟုတ် doxylamine အဖြစ်
Barbiturates ထိုကဲ့သို့သော secobarbital, butalbital, ဒါမှမဟုတ် butabarbital အဖြစ်
မူးယစ်ဆေးဝါး (opioids) ထိုကဲ့သို့သော codeine, hydrocodone, ဒါမှမဟုတ် oxycodone အဖြစ်
သက်သာစေသောဆေး Belsomra (suvorexant)၊ zaleplon သို့မဟုတ် Dayvigo (lemborexant) ကဲ့သို့သော
Benzodiazepines ထိုကဲ့သို့သော alprazolam, diazepam, temazepam, ဒါမှမဟုတ် lorazepam အဖြစ်
ကြွက်သားအပန်းဖြေ ထိုကဲ့သို့သော orphenadrine, baclofen, ဒါမှမဟုတ် chlorphenesin အဖြစ်
စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆေးဝါးများ ထိုကဲ့သို့သော buspirone အဖြစ်
အာရုံကြောနာကျင်မှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ ထိုကဲ့သို့သော gabapentin သို့မဟုတ် pregabalin အဖြစ်
ပျို့ဆေး ထိုကဲ့သို့သော metoclopramide, alizapride, ဒါမှမဟုတ် droperidol
ပိုးသတ်ဆေး ထိုကဲ့သို့သော carbamazepine, rufinamide, ဒါမှမဟုတ် valproic အက်ဆစ်အဖြစ်
ပါကင်ဆန်ရောဂါဆေးများ ထိုကဲ့သို့သော pramipexole, ropinirole, rotigotine, ဒါမှမဟုတ် piribedil အဖြစ်
အချို့ antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများ ထိုကဲ့သို့သော levomepromazine, methotrimeprazine, haloperidol, ဒါမှမဟုတ် blonanserin အဖြစ်
The narcolepsy မူးယစ်ဆေးဝါး Xyrem (ဆိုဒီယမ်အောက်ဆိုဒ်)
အခြား CNS စိတ်ကျရောဂါများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါက Ambien ဆေးထိုးခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်သို့မဟုတ်အခြားဆေးညွှန်းများကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ Ambien ကိုသောက်နေစဉ်လူနာများသည်အိပ်ချိန်အနီးတွင် CNS စိတ်ကျဆေးများသို့မဟုတ်အရက်မသောက်သင့်ပါ။ Ambien ကိုပေါင်းစပ်ထားသည့် Antististine များဖြစ်သော Benadryl (diphenhydramine) နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် Ambien ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်နှင့်ပြင်းထန်မှုကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။
Ambien အနေဖြင့်စိတ်ကျရောဂါကုသရန်ပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်ဆေးဝါးများဖြစ်သောရွေးချယ်သော serotonin ကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းသည့် inhibitors (SSRIs) ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်အဆိပ်အတောက်များကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။ ထပ်မံ၍ ညွှန်းဆိုဆရာ ၀ န်သည်ကုထုံးကိုပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ် Ambien ဆေးကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ MAO inhibitors, Marplan (isocarboxazid) နှင့် Nardil (phenelzine) တို့ပါ ၀ င်သည့် Antidepressants အမျိုးအစားသည် Ambien ၏ထိရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသဖြင့်ဆေးညွှန်းဆရာဝန်သည်ကုထုံးကိုစောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်သည်။
အချို့သောဆေးဝါးများ၊ အထူးသဖြင့်ကင်ဆာ immunotherapy ဆေးများ၊ ခန္ဓာကိုယ်မှ Ambien ကို metabolize နှင့်ဖယ်ထုတ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်သည်။ ဤဆေးများသည် Ambien ၏သွေးစုစည်းမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ အသုံးအများဆုံးအချို့မှာ Taflinar (dabrafenib)၊ Tibsovo (ivosidenib), Balversa (erdafitinib), Lorbrena (lorlatinib), Kevzara (sarilumab), Sylvant (siltuximab), Actemra (tocilizumab), Xtandi (enzalutamide), နှင့် bosentan ။ ထိုကဲ့သို့သော hydrocortisone နှင့် budesonide အဖြစ်အချို့သော corticosteroids လည်း Ambien ရဲ့ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။ စိန့်ဂျွန်၏ wort သည်လူကြိုက်များသောဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြစ်သောခန္ဓာကိုယ်ရှိ Ambien ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။
သို့သော်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အစားအစာများသည်သွေးထဲတွင် Ambien ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးပွားစေသဖြင့် Ambien ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတိုးပွားစေသည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည်:
ဂရိတ်ဖရု , peppermint ဆီနှင့် goldenseal
ပantibိဇီဝဆေးအမျိုးအစားအချို့ ထိုကဲ့သို့သော ciprofloxacin, clarithromycin နှင့် erythromycin အဖြစ်
ဆေး antifungal (azole) ဆေးများ ထိုကဲ့သို့သော itraconazole သို့မဟုတ် ketoconazole အဖြစ်
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆေးအမျိုးအစားများ ritonavir, atazanavir, darunavir, Invirase (saquinavir) နှင့် Crixivan (indinavir) ကဲ့သို့သော
သွေးဖိအားဆေး ထိုကဲ့သို့သော verapamil အဖြစ်
Benzodiazepine သက်သာစေသောဆေး ထိုကဲ့သို့သော diazepam နှင့် midazolam အဖြစ်
corticosteroids ထိုကဲ့သို့သော dexamethasone သို့မဟုတ် fluticasone အဖြစ်
ဤဆေးများ၊ အစားအစာများသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်မှုများအားရပ်ဆိုင်းရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် Ambien နှင့်အတူဤမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသောက်သုံးသူများသည်ကားမောင်းခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းလည်ပတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုးနိုးကြားကြားလိုအပ်သောအန္တရာယ်ရှိသောလှုပ်ရှားမှုများတွင်သတိထားရန်အရေးကြီးသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအများစုသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေပြီး Ambien နှင့်မတူပါ။ Ambien သည် ဦး နှောက်ကိုနှေးကွေးသောကြောင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအများစုသည်အိပ်ပျော်ခြင်း၊ မူးဝြေခင်း၊ မော်တာချို့ယွင်းခြင်း၊ ရိုးရှင်းသောစည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
1. ညွှန်ကြားအဖြစ် Ambien ယူပါ
သင့်အားညအချိန်တွင် ၅ မီလီဂရမ်၊ ၁၀ မီလီဂရမ်သို့မဟုတ် Ambien CR 12.5 mg သောက်လျှင်သောက်လိမ့်မည်။ ပထမအကြိမ်သောက်ခြင်းမ if ာရင်တောင် ၂၄ နာရီအတွင်းဒီဆေးသောက်ချိန်ထက်ပိုပြီးမသောက်ပါနဲ့။ အမျိုးသမီးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ သို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲသူများအတွက်ဆေးထိုးခြင်းကိုလျှော့ချပါမည်။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်ဆေးပမာဏအထိတိုးမြှင့်ခြင်းကိုမကြိုးစားပါနှင့်။
သင်လုပ်ကိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသောနေ့ခင်းဘက်လှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာ - လေးလံသောစက်ပစ္စည်းများလည်ပတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကားမောင်းခြင်း)
Ambien ကိုတတ်နိုင်သမျှမကြာခဏအသုံးပြုသင့်သည်။ Ambien ကိုအန္တရယ်ကင်းစွာအသုံးပြုခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းသန့်ရှင်းမှုနှင့်ဆေးဝါးသောက်ရန်ဖြစ်သည် ကျန်တဲ့အားလုံးပျက်ကွက်မှသာ ။
ရေနွေးသောက်ခြင်း၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ယောဂအားအိပ်ရာမ ၀ င်ခင်နာရီဝက်ခန့်သို့မဟုတ်တစ်နာရီခန့်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းစသည့်ညအချိန်အပန်းဖြေမှုအလေ့အထများကိုတီထွင်ပါ။
4. အချို့သောအစားအစာများ၊ ဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရှောင်ပါ
အချို့သောအစားအစာများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ဆေးဝါးများသည် Ambien ၏ဆိုးကျိုးများကိုတိုးပွားစေသည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည် Ambien နှင့်သင်သောက်သုံးနေသည့်ဆေးညွှန်းအကြားမူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုလမ်းညွှန်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ Ambienien ကိုစိတ်ချစွာယူရန်အရက်၊ ဆေးခြောက်၊ စပျစ်သီး၊ melatonin ဖြည့်စွက်ဆေး၊ valerian အမြစ်၊ cannabidiol၊ ဤအရာဝတ္ထုအားလုံးသည် Ambien ၏သက်သာစေသောဆေးကိုတိုးပွားစေပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအထူးသဖြင့်နောက်နေ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်ကိုတိုးစေသည်။ သင်သည်မည်သည့်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးများသို့မဟုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကိုမဆိုမသောက်မီဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆရာဝန်နှင့်အရင်ပြောပါ။
သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ် Ambien , Sanofi
သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ် Ambien CR , Sanofi
Ambien ဆိုတာဘာလဲ၊ အသုံးပြုခြင်း၊ သတိပေးချက်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများ , SingleCare
zolpidem ၏အသက်ပြင်းထန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်ညဥ့်နက်သည့်အကြိမ်အကြိမ်အကြိမ်အကြာတွင်ကျန်းမာသောယောက်ျားများတွင်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုတိုးချဲ့သည် , စမ်းသပ်နှင့်လက်တွေ့ Psychopharmacology ။
CYP3A4 နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု - အသစ်ပြောင်းခြင်း , Pharmacy Times
zolpidem ၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ် Multimodal စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း (အသံ - အမြင်အာရုံ, kinaesthetic နှင့်သာယာလှပ) , လက်တွေ့ Psychopharmacology နှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံ
Candida အစားအသောက်: သင်သိရန်လိုအပ်သောအမြန်အချက် ၅ ချက်
Coumadin vs. heparin: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည့်အရာ